प्रकृतिमैत्री जीवनशैली अपनाऔ ं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / प्रकृतिमैत्री जीवनशैली अपनाऔ ं
प्रकृतिमैत्री जीवनशैली अपनाऔ ं
Posted by: युगबोध in विचार December 25, 2017	0 226 Views
मानिसले आफ्नो दिनचर्या दिनानुदिन विलासीपूर्ण बनाउदै लगिरहे का छन् । विलासीपूर्ण जीवनशै लीले अन्ततः दुखद् परिणाम दिन्छ भन्ने तिर खासै चासो दिएको देखिदै न । हामीले हाम्रा परम्परागत खानपिन, बसाइ, उठाइ सबै लाई आधुनिकीकरणका नाममा परिवर्तन गराइरहे का छांै  । हाम्रा घरहरु माटो काठका हुन्थे  । छानाहरु खर वा ढुंगाका हुने गर्दथे  । यी घरहरु स्वास्थ्य अनुकुल हुने गर्दथे  । अहिले सिमेन्टका घर बन्दै छन् । यी घरहरु गर्मीमा अत्यधिक गर्मी र ठण्डीमा अत्यधिक ठण्डी हुने गर्दछन् । जसले गर्दा चिसो को कारण हुने रो गहरुमा व्यापकता बढ्दै गइरहे को छ । बढ्दो सिमे न्ट प्रयो गले सिमे न्ट उद्यो गको विकास गराउ“छ । यी उद्यो गहरुले स् वभावतः प्रदूषणमा बृद्धि गराउ“छन् । यसले पनि झन नया–नया रोगको विकास गराउछ । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्या“सको बृद्धि गराउन सहयो ग पु¥याउ“छ । यति मात्रै हो इन, यसलाई चाहिने कच्चा माल चुनढुंगाको उत्खनन बृद्धि गराउ“छ । यसले प्राकृतिक भूबनो ट खलबल्याउछ भने पानीका स्रो तहरु घटाउ“दै लग्छ ।
आधुनिक सुरक्षित घरका नाममा असुरक्षित घर र जीवन बनाउन लागिपरे का छौ ं । शारीरिक श्रम गर्न छाड्दै छांै  । गाडी मो टरको अत्यधिक प्रयो गमा ध्यान दिदै छौ ं । यसले पनि प्रदूषण बढाउ“दै लगिरहे को छ । हामी एकातिर शारीरिक श्रम नगनेर् अकोर् तिर शरीरमा उत्यधिक बो सो उत्पादन गनेर् खाने कुरा खाने मा जो ड दिने गर्दछौ ं । अझ यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र मादकपदार्थको से वनमा व्यापकता ल्याइरहे का छौ ं । जसले गर्दा सुगर, ब्लड प्रे सर र मुटुसम्बन्धी रो गहरु बढाइरहे का छांै  । ५० वर्षपछि दे खापनेर् रो गहरु युवा अवस् थामा दे खा पर्न थाले  । जस् तै ह्दयघात, सुगर, ब्लड प्रे सरजस् ता रो गमा व्यापकता आइरहे को जताततै दे खिदै छ । शारीरिक श्रम गर्न लाज वा दुःख महसुस गर्दछौ ं । तर अकालमै ज्यान फाल्न लागि पर्दछौ ं । अहिले मर्निङवाक र यो गमा बृद्धि भइरहे को छ । स् वास् थ्यको लागि यो एकदमै राम्रो हो । तर शारीरिक श्रम प्रशस् त गनेर् हो भने मानिस दीर्घायु र स् वस् थ रहन सक्छ । तर प्राकृतिक वातावरण अनुकूल हाम्रा रहनसहनलाई आधुनिक वातावरणतिर बनाउ“दा झनै समस् याहरु चौ तर्फीरुपमा उठ्न थाले का छन् । जस् तै सिमे न्ट घर त्यसमा जडान गरिने एसी र कुलर । यति मात्र हो इन, फ्रिजजस् ता वस् तुको प्रयो गले पर्यावरणलाई एकदमै नकारात्मक बनाइरहे का छौ ं । यी वस् तुको उत्पादन गर्दा हो सवा बिग्रेर फाल्दा होस् यसमा प्रयो ग भएका वस् तुले हाम्रो प्रकृतिलाई बर्बाद बनाइरहे को छ । त्यसैले जति हामीले आफूलाई कथित सुविधायुक्त बनाउ“छौ ं त्यति नै हाम्रो जीवन दुखी र अल्पायुको बन्दै जान्छ भने प्रकृति प्रदूषित भइ झन जटिल समस् या बढाउदै लग्ने छांै  । त्यसै ले श्रम गरांै । श्रमको सम्मान गरौ ं । पुनः प्रकृतितिर फकौर् ं । बढ्दो समस् याको सही समाधान यही हो  ।
हामीले प्रयो ग गदैर् आएका खाद्यान्नमा मीठो र मसिनो का नाममा परिवर्तन गदैर् गइरहे का छांै  । जसले गर्दा हाम्रो भो जनलाई आफै विषाक्त बनाउ“दै लगिरहे का छौ ं । हामीले प्रयो ग गदैर् आएको मकै , को दो , फापर, गह“ु, जौ जस् ता खाद्यबालीको ठाउ“मा चामल प्रयो गमा व्यापकता ल्यायौ ं । यो उत्पादनको लागि रासायनिक मल र बिषादीको प्रयो गमा व्यापकता ल्यायांै  । यसबाट उत्पादित खाद्यबाली मन्द विषयुक्त हुन्छ भन्ने कुरातिर हाम्रो ध्यान गएन । अझ हाइब्रिड धान र तरकारीमा व्यापकता ल्यायौ ं । यसले प्राकृतिक बीउविजनलाई विस् थापित गराई बीउविजनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा निर्भर हुन गइरहे का छौ ं । हाइब्रिड खाद्यबाली स् वास् थ्यको लागि फाइदाजनक कदापि हुन सक्दै न । बरु धानका प्राकृतिक प्रजातिहरुलाई लो प बनाउ“दै छ । चामल स् वास् थ्यका लागि फाइदाजनक छै न । यसको प्रयो गले बो सो बृद्धि गराउ“छ । पञ्जावीहरु चामल प्रयो ग नगरी अत्यधिक मात्रामा गहु प्रयो ग गर्दछन् भने बिहारीहरु अत्यधिक चामल प्रयो ग गर्दछन् । यी दुई ठाउ“का जनताको स् वास् थ्य र आयुलाई हे रे पुग्छ । यस् तै गरी हाम्रो पहाडमा बस् ने पहिले का मानिस र तराईमा बस् ने मानिसबीच शारीरिक शक्तिमा कति भिन्नता थियो  । हामै ्र दाङमा पनि मै ले थाहा पाउ“दासम्म ८० प्रतिशत दङालीले खाद्यान्नमा मकै प्रयो ग गर्दथे  । जसले गर्दा मानिस स् वस् थ थिए । अहिले चामल प्रयो गमा व्यापकता आयो । जसले गर्दा मन्द विषयुक्त खाद्यान्न प्रयो ग गरिरहे का छौ ं । हामीले खाद्यान्न स् वस् थ रहनको लागि प्रयो ग नगरी क्षणिक मीठो को लागि प्रयो ग गरिरहे का छांै  । हामीले आफूलाई त रो गी र अल्पआयुको बनाउ“दै लगि रहे का छौ ं भने हाम्रो माटो समे तलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउ“दै छौ  । आज हाम्रा खे तबारी अनुत्पादित बनाउदै लगिरहे का छौ ं । खाद्यबालीमा रो गव्याधी बढाउ“दै लगिरे का छांै  । अझ खे तबारी जो त्दा प्रयो ग गरिने रो डाबे टरको प्रयो गले माटो मा रहे का खाद्यबालीका मित्र जीवको विनाश गदैर् लगिरहे का छौ ं । जसले गर्दा माटो सुक्खा बन्दै गइराखे को छ । गो रुबाट धान दाउन छाडे र मसिन प्रयो ग गर्दछौ ं । त्यसले वायुमण्डलमा उडाउने धुलो ले कति नो क्सान गरे को छ ध्यान दिदै नौ ं । प्रयो गकर्ताले मास् कसम्म लगाएको दे खिदै न । पराल त्यसै खे र गई पशुको आहारमा कमी ल्याइरहे का छौ ं । अहिले त झन खे तमै धान, गहु, काट्ने मे सिनको प्रयो गले एकातिर पशुको आहारा बर्बाद पारिरहे का छौ ं भने अकोर् तिर बाली लगाउनको लागि आगो लगाउने प्रचलन बढ्दै गईरहे को छ । हाम्रो दे शमा पनि यो प्रविधि भित्रिएको दे खिन्छ । पञ्जावका खे तबारीमा आगो लगाउ“दा प्रत्ये क हिउ“दमा दिल्ली धु“वा र तुवा“लो ले धपक्कै छे क्दै आइरहे को दे खिन्छ । त्यतिखे र दिल्लीमा बस् नै नसक्ने प्रदूषण बढ्न पुग्छ । त्यसै ले आधुनिकता र छिटो छरितो को नाममा आफ्नै जीवनलाई बर्बाद बनाइरहे का छौ ं ।
प्रकृतिले शाकाहारी र मांसाहारी प्राणीको स् वास् थ्यको बनो ट र आनीबानीमै भिन्नता गरिदिएको छ । जस् तै मांसाहारीको आन्द्रा छो टो , आ“खा चम्किलो , दारा (दा“त) तिखो , नंग्रा (नङ) लामा र तिखा, रिसाहा पानी जीब्रो ले खाने जस् ता भिन्न बनो ट र स् वभाव बनाइदिएको छ । मान्छे को आन्द्रा लामो हुन्छ । मुखले पानी खान्छ, दा“त, नङ, तिखा हु“दै नन् । आ“खा चम्किलो हु“दै न । शान्त स् वभावको हुन्छ । तर पनि मांसाहारी बन्दै गइरहे का छौ ं । जसले गर्दा नकारात्मक सो च र विचारको विकास दिनदिनै बढ्दै गइरहे को छ भने पाचनक्रिया कमजो र ह“ुदै गएको छ । तर पनि मासु भने पछि हामी मरिहत्ते गर्दछौ ं । अब त घरघरमै ब्रो इलर कुखुरा पाइन थाल्यो  । यो खाएर मान्छे ब्रो इलर जस् तै मो टाउन थाले  । वास् तवमा मो टो पन नभएर फो स्रो मासु शरीरमा लागे को हो  । वास् तवमा ब्रो इलर स् वास् थ्यको लागि कति हानिकारक छ त्यो विशे षज्ञहरुलाई थाहा हो ला । मलाई कतिसम्म थाहा छ भने ब्रो इलर जति पकाए पनि हड्डीभित्र रातो भइरन्छ । यो के मिकलको कारण नभई अरु के हो त ? अरु चिजको मासुको हड्डीभित्र रातो पन ह“ुदै न । ब्रो इलरमा रातो पन रहिरहनु भने को खतरनाक के मिकल नभएर के हो त ? अस् वाभाविकरुपमा ब्रो इलर बढ्ने र मोटाउने त्यसै भएको हैन होला । यसको सेवन अत्यधिक बढ्दै छ । एक त प्राकृतिकरुपमा मानिस शाकाहारी हो, त्यसमा पनि कृत्रिमरुपमा तयार पारिएको ब्रो इलर खाएर हामी कति स् वस् थ रहौ ंला ? मै ले ब्रो इलर उत्पादनको बिरो ध गरे को हो इन । मै ले त के वल हाम्रा खानपानमा आएको परिवर्तनले हामीलाई कमजो र र रो गी बनाउ“दै छ भन्ने सन्दर्भमा ले ख्दै छु । खानपान बसाइ उठाइलाई प्रकृतितिर मो ड्नु उपयुक्त हुन्छ । यसतर्फ राज्यले चे तना फै लाउन जरुरी दे खिन्छ ।
यदि हामीले मानव स् वास् थ्य र प्राकृतिक संरचना ध्यान नदिएर गरिने विकासले विनाश निम्त्याउ“छ । विकासलाई सधै प्रकृतिबिरो धी बनायौ ं भने आफै विस् थापित हु“दै जान्छौ ं । हाम्रा वै ज्ञानिकहरुहरुले आफ्ना आविस् कारहरुलाई प्रकृतिमै त्री वनाउन लाग्नुपर्दछ । उत्पादकहरुले पनि धे रै सो चे र मात्रै उत्पादन गर्नुपर्दछ । मानिसको सो च, विचार र व्यवहारले हराभरा सुन्दर यो धर्तीलाई बर्बाद बनाउदै लगिरहे का छौ ं । यो धर्तीलाई सृष्टिचक्रको विकासका लागि अयो ग्य बनाउ“दै लगिरहे का छांै  । मान्छे ले आफूलाई कमजो र र रो गी बनाउ“दै लगिरहे का छौ ं । प्राणीमा सबै भन्दा सचे त र बुद्धिमानी मानिस हो । तर आज मानिसले नै प्रकृतिको सुन्दर फूलबारीरुपी धर्तीलाई उजाड बनाउ“दै लगिरहे का छौ ं । त्यसै ले प्रकृतितिर फर्किने समय भएको छ । स् वच्छ पर्यावरणसहितको धर्ती रस्वस्थ जीवन सहितको विकास आजको आवश्यकता हो  । यसतर्फ सबै सरकारहरु लाग्नुपर्दछ । हाम्रो जीवनशै लीलाई प्रकृतिमै त्री बनाउ“दै जाउ । २१ आंै शताब्दीले यही भनिरहे को छ ।
Previous: तामझामको क्रिसमस डे
Next: दाङले मागेको होइन राजधानीले खोजेको दाङ